चितवनकाे विकासबारे अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको प्रतिवद्दता-पत्र (पूर्णपाठ) | रिपोर्टर्स नेपाल
चितवनकाे विकासबारे अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको प्रतिवद्दता-पत्र (पूर्णपाठ)
२०७४ कार्तिक २८ गते प्रकाशित, l १६:००
काठमाडौं, २८ कार्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनकि गरेका छन् ।
दाहालले जारी गरेको घोषणापत्रको पूर्णपाठ :
देशलाई समृद्ध गर्दै जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गरी समाजवादमा पु¥याउन पुनः नयाँ प्रतिवद्धताका साथ हाम्रो मुख्य नेतृत्व क. प्रचण्ड चितवनबाटै यसको नेतृत्व गर्ने संकल्पका
साथ आउनुभएको छ । चितवनका जनताको विश्वासको बलमा राष्ट्रिय नेतृत्व लिएर देशलाई समृद्धि र समानताको नयाँ अभियानको बाटोमा अगाडि बढाउने संकल्प क. प्रचण्डको रहेको छ ।